Jijjiirraan IHAADEG Irree Muummicha Ministeraa Daran Jabeesse
Fulbaana 24, 2010
Jijjiirraan IHAADEG keessatti godhame Ka Paarticha Haaressu Otuu hin taane Kan akka Paartichii fi Mootummaan Qaajeelfama nama tokkoon qofa bulu taasise.
Paartiin taayitaa Motummaa Itiyoophiyaa harkaa qabu, IHAADEG, kora walii-galaa marsaa saddeettaffaa, magaalaa Adaamaatti geggeeffatee ture. Sana duras, paartiileen miseensota isaa tahan kanneen akka DHDUO yokaan OPDO fi Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay mata mataatti kora geggeeffatanii hoogganoota filatanii jiran.
Korawwan Ihaadeg san irratti jijjiiraan geggeessamee fi karoora dinagdee waggaaa shanii itti fuuleffatame ilaalchisee akka xiinxaala isaanii nuuf ibsan Berliin, Jarmanii irraa kan haasofsiisne hayyuun falaasama polotikaa dur Yunivarsitii Finfinnee keessaa barsiisaa turan Dr. Alamaayehu Birruu Walga’iilee geggeeffaman mara irratti jijjiirraalee aangawootaa geggeessaman martinuu, aangoodhuma nam-tokkoo - ka Muummicha-ministaraa Mallas Zeenaawii daran jabeessuuf kan akeekaman fakkaatu jedhu.
Kora Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay irratti qondaalonni dhaabicha riphxee-loltootaa durii keessatti jaallan Mallas turan kanneen akka Siyyum Masfinii fi Harkebee Iqqubaay faa koree gidduu keessaa harcaasamuunii kanneen dhiheenya gara dhaabichaatti dhufan namoota baay'ee hin beekamneen bakka-buusamuun akka dhaabichi qajeelfama nam-tokkoo qofaan geggeessamu taasisa, jechuun ibsan, Dr. Alamaayyoon.
Guutummmaa gaaffii fi deebii kanaa MP3 tuquun dhaggeeffadhaa.